PressReader - Ilanga: 2017-11-09 - Ugqeme unina ngesando washona
Ugqeme unina ngesando washona
Umndeni ulandwe emlindelweni
Ilanga - 2017-11-09 - Izindaba - SKHOSIPHI MTHEMBU
UHLAFUNA ujeqeza umndeni wakwaMthembu eNgqopheni, eMtubatuba, ogwini olusenyakatho yeKwaZulu-Natal emuva kwesigameko sokubulawa kwelunga lawo ngesihluku ngoMgqibelo ebusuku. Lo mndeni usola indodana kadadewabo omncane kamufi ngalesi senzo - esingeke siyidalule.
UNkz Bongiwe Tembe (54), kuthiwa ugqenywe ngesando washonela endleleni ebheke esibhedlela. ILANGA lithole ukuthi le ndodana esolwayo ike yashaqwa ngamaphoyisa mayelana nalolu daba kodwa abuye ayidedela ngoba bungatholakali ubufakazi.
Kubikwa ukuthi lokhu sekuhlukanise umndeni phakathi njengoba kukhona abathi kabakhululekile njengoba indodana iphambana nabo egcekeni.
UMnu Buyisani Mdletshe (34) ozalwa ngumufi, uthi akangabazi ukuthi unina ubulewe ngukanina ngoba nguyena obesele naye ekhaya kanti vele ungumuntu ohluphayo. Uthi kabeneme neze ngokudedelwa kwaleli lunga lomndeni ngoba ngisho abantu sebeyesaba ukuyokhalisa umndeni.
Indlela isimo athi simuncu ngayo, kwesinye isikhathi nguyena olala emakhandleleni ngenxa yokuthi uninakhulu, uNkk Ntombiyomlungu Mthembu, uyesaba ukuba sendaweni eyodwa nokanina.
“Le nto yenzeke singekho ekhaya siye emlindweni, umfowethu ubesele nomama lapha ekhaya. Sizwe sesibizwa nje sitshelwa ukuthi masiphuthume kunomonakalo osuwenzeke ekhaya.
“Sifice esaphefumula elimele kanzima ekhanda, sazama ukumphuthumisa esibhedlela kodwa washona endleleni. Into eyenza sisole umfowethu wukuthi nguyena kuphela obesele nomama ekhaya futhi isando esinegazi ngesakhe, sitholwe eduze nendlu yakhe.
“Kuyasixaka ukuthi udedelwe kanjani. Yize amaphoyisa emdede- lile kodwa thina siyazi ukuthi nguyena obulele umama,” kusho uMnu Mdletshe. Uthi kungcono ukuba amaphoyisa amdedele waya kwenye indawo, angabi segcekeni elilodwa nabo.
Okhulumela amaphoyisa KwaZulu-Natal, uCol Thembeka Mbhele, uthi amaphoyisa aphenya icala lokubulala.
* Kwesinye isigameko esenzeke kuyona le ndawo, kuboshwe owesilisa osolwa ngokuhlahlela uninalume ngocelemba. Kuthiwa isidumbu sikaMnu Thembinkosi Nxumalo sitholakale sidindilizile kanti ubekade ehamba nomsolwa bebuya ukuyocima ukoma.
UNkz Lindiwe Ndwandwe ongudadewabo kamufi, abe ngunina ka- msolwa, uthi yize engazi ukuthi umfowabo ubulawe ngubani kodwa ubenezitha eziningi. Uthi kakukho okuningi akwaziyo ngaphandle kokuthi umufi ubehambe nendodana yakhe kuyophuzwa.
“Nami ngizwe sengibizwa yindodana yami ingitshela ukuthi umfowethu ulimele. Ingitshele ukuthi bebehambisana yabe isiyamshiya umfowethu endleleni ngoba yena ubesafuna ukuphindela emuva lapho kade bephuza khona.
“Ithi ngesikhathi iyombheka ifice sekugcwele abantu, ifike eseshonile,” kusho yena. UMnu Mzi Ncube ongusihlalo weCommucity Policing Forum uthi umphakathi usethuke kakhulu ngalezi zigameko ezenzeke endaweni yabo izinsu- ku zilandelana.
Uthi bayethemba ukuthi amaphoyisa azowenza umsebenzi wawo nabasolwa bajeze ngabakwezile.
“Laba bantu bobabili (uNkz Tembe noMnu Nxumalo) babulawe ngesihluku esixakile, siyethemba ukuthi amaphoyisa azowenza umsebenzi ngoba ngizwile ukuthi khona ababoshiwe futhi yizihlobo kuzona zombili izigameko.
“Engisafuna ukukuthola wukuthi udedelwe kanjani lona obesolwa ngokubulala unina ngoba ubufakazi bukhona,” kusho yena
UMnu Sandile Manqele oyikhansela kule ndawo, uthi bayivakashele imindeni eshonelwe kanti basezinhlelweni zokulekelela umndeni wakwaMxumalo ngoba kawunawo amandla okuzifihlela.
“Sesixhumene nosomabhizinisi abathembisile ukuthi bazosiza ngokuthenga ukudla. Sizosiza nangebhokisi ukuze bezokwazi ukufihla isihlobo sabo ngesizotha,” kusho yena.
Unxuse abantu ukuba behlise imimoya bayeke amaphoyisa enze umsebenzi wawo. UCol Mbhele uthi kulesi sigameko kuboshwe umsolwa oneminyaka engama-23 ubudala wavela izolo ngoLwesithathu eNkantolo yeMantshi yaKwaMsane